Mfefe na amụma ndekọ ọnụ ọgụgụ dị mfe (kọlụm 473) - Rabbi Michael Avraham
Mfefe na amụma ndekọ ọnụ ọgụgụ dị mfe (kọlụm 473)
Nkwupụta 16	/ 07 Ọnwa 05 - 2022/XNUMX/XNUMX 07 / 05 / 2022
Too na-ogologo oge?
Meghee na taabụ ọhụrụ
Budata [321.87 KB]
Budata [53.66 KB]
Ihe ị rịọrọ
Echiche 16 na “Mfefe na amụma Statistical Dị Mfe (Kọlụ 473)”
Z. Bayer 07 - 05/2022/23 na 14:XNUMX
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 na 07:XNUMX
N'okwu nke arụmụka Bibi, arụmụka ahụ na-eche na enwere otu kachasị, mgbe ọ ga-ekwe omume (na ọbụnadị) na e nwere ọtụtụ ndị mara mma, ya mere ọ dịkarịa ala otu kacha nta. N'okwu bara uru arụmụka ahụ abaghị uru, ihe arụmụka na-ekwu bụ na enwere ụtụ isi kachasị mma (n'ihe gbasara ego steeti), arụmụka na-enweghị isi. Ajụjụ dị mkpa bụ gịnị bụ pasentị kacha mma, nke nwere ike ịdịgasị iche site n'otu akụ na ụba gaa na nke ọzọ yana ọnọdụ akụ na ụba macroeconomic.
Na nkenke, obere ozi ihe nlereanya ahụ nwere (echiche ziri ezi banyere eziokwu) ka ọ na-abaghị uru.
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 na 13:XNUMX
Nke a bụ nkatọ kacha esighi ike. Ọ bụghị ọbụna kpam kpam eziokwu, n'ihi na o yikarịrị ka ọ ga-enwe naanị otu kacha, na nke ọ bụla ubi ọ dịkarịa ala na-egosi na ọ bụchaghị a tax abawanye na-abawanye revenue. Nke a bụ isi arụmụka.
Anaghịkwa m ekweta n'ezie na obere ozi adịghị enye aka. N'ebe a kwa enwere usoro mgbagwoju anya nke nwere nke kacha mma.
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 na 29:XNUMX
Atụgharịbeghị m, mana otu okwu lekwasịrị m anya. Ị dere na n'echiche gị mgbe enweghị ozi gbasara usoro nkesa mgbe ahụ ọ gaghị ekwe omume ọbụna ikwu banyere ezi uche. N'ikwu okwu banyere ihe ị kwuru na njedebe maka myirịta na mkparịta ụka gbasara Gd na okike, na isiokwu nke igosi ihe dị iche iche nke usoro iwu nke m chere na ị na-ekwu na a pụrụ ikwu ihe dị iche iche na-enweghị ozi ọ bụla gbasara usoro nkesa. Kedu ihe dị iche?
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 na 44:XNUMX
Mgbe anyị amaghị usoro a ma ọlị mana enwere usoro n'ebe ahụ, ọ nweghị uru ịche na nkesa ahụ bụ otu. Dịka m kwuru, nke a kacha bụrụ ndabara nke m na-agaghị ewuli na ya. Ma na physiological nkà mmụta okpukpe echiche e nwere echiche na nguzobe nke ụwa bụ a zuru ezu ikpe si kpam kpam ihe na-adịghị (ma ọ bụghị ajụjụ ga-anọgide ihe kere ihe mbụ). N'ọnọdụ dị otú ahụ a na-eche na nkesa otu bụ ihe ezi uche dị na ya na ezi uche. Nkesa na-ezighi ezi chọrọ ihe kpatara ya. Na lotiri nke mkpụrụ obi, ma ọ bụ Chineke na-eme ma ọ bụ usoro ọzọ e nwere ihe kpatara ya, na otu onye ga-ama ihe mere na-ekwu ihe banyere ya.
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 na 56:XNUMX
Ọ gbagwojuru m anya mana m ga-anwa imetụ ntakịrị. Ọ na-esiri m ike ịhụ ọdịiche dị n'etiti nkesa otu na nkesa na-enweghị isi, mana m ga-ahapụ ya (n'ihi na ọ bụ echiche dị mkpa ka a tụgharịa uche) wee jụọ ma ọ bụghị - yiri nkesa otu (nke dabara maka nlebara anya symmetry) bụ nnọọ pụrụ iche karịa ụfọdụ na-abụghị uniform nkesa.
Na mgbakwunye, enwere m olileanya na anaghị m ezighi ezi ma na-akpaghasị, ọ dị ka n'ihe gbasara ọtụtụ ihe mgbochi na enwerekwa usoro maka ngwaike.
H. Bayer 08 - 05/2022/16 na 53:XNUMX
kpọmkwem. Ya mere, a na-ewere nkesa otu na-enweghị ozi ndị ọzọ. Ọ bụ nke kachasị mfe na nke symmetrical.
Banyere halakhah na mmachibido iwu, ikpe nke ọ bụla n'onwe ya. Ma, e nwere otu na-aga ọ bụghị nanị mgbe nlebanya ọnụ ọgụgụ ma mgbe iwu-halakhic iwu (e.g. na-agbalịsi ike maka mfe. E nwere meta-iwu ụkpụrụ na-emetụta, wdg).
H. Bayer 08 - 05/2022/18 na 53:XNUMX
Ọ bụrụ na ọ bụ nke kachasị mfe na nke symmetrical mgbe ahụ ọ bụ ihe pụrụ iche, ma? Ihe eji ebi ndụ wdg.
H. Bayer 08 - 05/2022/20 na 30:XNUMX
Anyị anaghị esi nri nkesa. Nkesa na-achịkwa lọtrị. Nkesa otu bụ nke kachasị mfe ya mere echere. Dị nnọọ ka ịkwanye ntụpọ n'ahịrị kwụ ọtọ dị mma karịa ịkwanye ha n'akụkụ sine, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịsị na ahịrị kwụ ọtọ bụ nke kachasị mfe na ya mere ọ bụ ihe pụrụ iche.
H. Bayer 08 - 05/2022/21 na 40:XNUMX
Ọ dị ka site n'ebe ị bịara n'ahịrị kwụ ọtọ kama n'ihi na ị na-ahụ na e nwere ahịrị dị mfe na pụrụ iche nke na-akwa ihe dịka ihe dị mgbe ahụ, yabụ na nke a abụghị ihe ndaba. Ma anyị enweghị ike iche na mbụ na a akpan akpan onu ga-ada na a ogologo ahịrị na-enweghị ihe ọ bụla anchoring. Aghọtara m na ị na-ekwu nlebara anya dị mfe bụ ihe kacha mkpa, mana kedu ka ahịrị si egosi nke ahụ.
(M tụgharịrị uche n'ihu okwu gara aga banyere lọtrị nkesa ma enwetaghị ya ma m ka na-eche)
H. Bayer 09 - 05/2022/07 na 38:XNUMX
Aghọtachaghị m ihe mkparịta ụka ahụ gbasara. Ị kwenyeghị na na enweghị ozi ndị ọzọ enwere ike nkesa otu? Kedu ihe kpatara enwere ọdịiche n'etiti nsonaazụ? Ọ bụrụ na mmadụ amaghị banyere ọdịiche dị n'etiti nsonaazụ na oghere nlele ọ ga-abụ na ha niile nwere otu ibu. Amaghị m ihe m ga-agbakwunye.
H. Bayer 09 - 05/2022/09 na 48:XNUMX
Ma ị bụ nke echiche na ọbụna na-anọghị nke ozi a edo nkesa na mkpụrụ obi bụ eleghi anya. Ma ị kọwapụtara na ọ bụ n'ihi na e nwere usoro a na-amaghị, na naanị na mmalite nke na-emechabeghị ka usoro iwu kwesịrị ịpụta na nkesa otu na ya mere ihe dị iche iche nke usoro ahụ nwere ihe àmà nke okike.
M ka na-adịghị a siri ike echiche, na ma eleghị anya, e nwere ọdịiche dị n'etiti tupu ihe omume (na ọ bụrụ na onye na-agbakọọ atụmanya onye kwesịrị eleghị anya iche a edo nkesa) na mgbe o mere (mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ ike piously iche na o kwesịrị. emela na nkesa otu). Na MM na usoro gị ajụrụ m ma ọ bụrụ na ike gwụrụ m.
H. Bayer 09 - 05/2022/12 na 32:XNUMX
kpọmkwem. M wee kọwaa nkewa. Na usoro nkesa ikpe bụ otu. N'ime usoro nhọpụta ọ nweghị ihe mere a ga-eji chee kpọmkwem nke ahụ. M kwukwara na ma eleghị anya, nke a bụ ihe m gaara eche na-enweghị ozi, ma agaghị m ewuli na nke ahụ.
Ọ dị m ka ike agwụla anyị.
H. Bayer 09 - 05/2022/12 na 54:XNUMX
Ị nwere ike ime ka o doo m anya ma ọ bụrụ na m ghọtara n'ụzọ ziri ezi na na-egosi na ọ dịghị ihe (na-eche na ọ ga-ekwe omume, n'ihi na-egosi na Petah Tikva n'adabereghị na cosmology) ị na-ekwu nke ọma na a ga-enwe otu nkesa (na nke a bụ. nkwupụta dị oke egwu maka ihe akaebe), ọ bụghị naanị echiche nke enweghị ihe ọmụma.
H. Bayer 09 - 05/2022/13 na 38:XNUMX
Ee. Ọ bụrụ na ọ bụghị ebe ọ bụla, a ga-ewere ya dị ka nkesa otu.
Onye ikpe ikpe ikpeazụ
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 na 30:XNUMX
Ọ bụrụ na echiche ahụ bụ na anyị abụghị ndị pụrụ iche, mgbe ahụ ọ dịghị mkpa ma ihe ọ bụla na-eme anyị na-eme na nke mbụ ma ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya, na ihe gbasara nke 50% ma ọ bụ ihe gbasara nke puru omume nke 1 kwa puku ijeri, dị ka iwu ndekọ ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ megidere. nye ha. Ihe ndị a niile anaghị agbanwe ma ọlị. E kwuwerị, anyị abụghị ndị pụrụ iche.
Yabụ na mkparịta ụka a niile adịghị mkpa.